Warshadda Dhadhaminta, Shirkadaha - Soosaarayaasha Xeritaanka Shiinaha
Laba Qashin 4 4 M Wheel M ...
Mashiinka Ka Saarista 3 Dhibco ...
Qoryaha loo yaqaan 'Chi Chipper with Gasoline / naaftada / Mashiinka Korantada
Soosaarka Gaaska Shidaalka 11KW dhexroor dhererkiisu dhexdhexaad yahay cm 230 Xawaare r / min 3400 Chipping Capacity mm 1-100 Karti ahaan kg / h 600-800 Cabbir Mm 1400 * 1200 * 600 Miisaan Kg 140 alwaax alwaax waa nooc ka mid ah jajabka jajaban, kaasoo inta badan ah waxaa loo adeegsaday soosaarid geed, qoryo kala geddisan, waardiyaha, shiine shiine, bamboo asal ah iyo waxyaabo kale. Waxay aad ugu habboon tahay ka baaraandegga shiishada alwaax ee dhexdhexaad dhaqanka fangaska la cuno. Isbarbardhiga waa annaga ...
Gogol ku-Kordhinta Geed-Bixinta, Mashiinka Feyrista iyo Ciidda Buritaanka Ciidda
Mashiinkaani wuxuu leeyahay shan howlood oo waaweyn: buuxinta otomaatig marba marka la dhammeeysto, barkinta, qulqulka iyo bacrimiye keli ah oo gadaal laga jaro, qulqulka wejiga iyo haramaha; Mashiinku wuxuu leeyahay faa'iidooyinka mugga yar, cufnaanta hoose, qalliinka ku habboon, wuxuu ku habboonaan karaa isteerinka, qulqulka iyo unugyada bacrimiyeyaasha ee miro orchard, Wolves, Shiinaha, canab, khudradda cagaaran iyo dalagyada kale ee dhaqaalaha.
Mashiinka Calool-Biraha loogu talagalay 3 Dhibic Hitch Mini Tractor
Mashiinka furitaanka waa nooc ka mid ah aaladda firfircoon ee furitaanka furitaanka.
Mashiinka Xawaareynta Beeraha Loogu Talagalay Socodka Kusoo Bixida iyo Kala Duwashada Mini Mini
Waxaa loo isticmaalaa iyada oo lala kaashanayo cagaf lugeynaya iyo cagaf cagaf ah. Awoodda taraafikada waxaa loo kala qaadaa madaxa gooye goos gooska iyadoo loo marsiinayo jirka sanduuqa, madaxa wax gooyana waa loo wareegaa si uu u dhammaystiro qulqulka howsha isla markaana si weyn kor loogu qaado waxtarka howlgalka. Waa u gargaar awood leh saaxiibbada beeralayda ah. Mashiinka furitaanka waa nooc ka mid ah aaladda firfircoon ee furitaanka furitaanka.